बदलिएको रातो मान्छे :: Setopati
उमंग कार्की काठमाडौं, साउन १७
एउटा शहरमा तीनवटा रंगका मान्छे थिए- निलो, रातो र सेतो।
तीनवटै भिन्नभिन्न खालका मानिस थिए। सेतो रंगको मान्छे कहिले पनि अरूको नजरमा देखिदैन थियो। रातो रंगको मान्छे धेरै घमण्डी थियो। निलो भने इमान्दार र असल थियो।
एकदिन निलो र रातो मान्छे बीच झगडा भयो। हानाहान भयो। निलोले रातोलाई अब यस्तो लडाई नगराै‌ं भनेर अनुरोध गर्यो। तर, रातो मान्छेले घमण्डसाथ भन्यो, 'तिमी मसँग डराउँछौ। त्यसैले, लडाई नगरौ भन्छौ।'
त्यसपछि उनीहरूको फेरी लडाई भयो।
उनीहरू बीचको लडाइले निलोको मान्छे घाइते भयो। सेतो मानिसले सबै कुरा देखिरहेको थियो। अनि उसले निलो मानिसलाई सहयोग गर्न रातोको पक्ष लिएर लडाई गर्यो। सेतो मानिसलाई अरूले देख्न नसक्ने हुनाले रातो मान्छे छटपटाएको देखेर निलोलाई अनौठो लाग्यो।
रातो आफ्नो शत्रु भएतापनि कसले हान्यो भनेर निलोले सोध्यो। सायद त्यही भगवान हुन भन्ने सोच्यो। रातोलाई नहान्न उसले अनुरोध पनि गर्यौ। निलोको कुरा सुनेर सेतो मान्छेले भन्यो, 'किन उसलाई नहान्ने?'
निलोले अब पनि ऊ सुध्रन सक्छ भनेर जवाफ दियो। आफूले लडाई गर्दा गर्दै पनि निलोको कुरा सुनेर रातोको मन बदलियो र तीनैजना बीच मित्रता भयो।
निलो मान्छे भने इमान्दार थियो। त्यसैले उसलाई सबैले मनपराउँथे। उनीहरूको मित्रतापछि रातो मान्छेले निलोलाई सोध्यो, 'तिमीलाई किन मान्छेहरू असाध्यै मन पराउँछन्? र मलाई मन पराउँदैनन्?'
निलोले भन्यो, 'मलाई अरूले धेरै इमान्दार भएकाले मन पराएको भन्छन्। म शहरमा आवश्यक व्यक्तिलाई मद्धत गर्छु। शायद तिमीलाई अरूले घमण्डी भएको पाउँछन्। त्यसैले तिमीलाई कोही पनि मन पराउँदैनन। तिमी शहरमा अरूको मद्दत पनि गर्दैनौं। त्यसैले शायद तिमीलाई मन नपराएका हुन सक्छन्।'
यस्तैमा सेतो मानिसले निलोजस्तै इमान्दार हुन सल्लाह दिन्छ। रातो मानिस सेतोलाई नदेखेर, तिमी को बोलेको भन्छ। जवाफमा सेतोले भन्छ, 'म पनि तिमीजस्तै एउटा मान्छे हो। म सेतो रंगको छु। त्यसैले मलाई कोही पनि देख्न सक्दैन। म तिमी अगाडि नै छु।'
रातोले निलोको कुरा सुनेर विनम्रसाथ दुवैलाई धन्यवाद दियो। शहरमा आवश्यक व्यक्तिलाई मद्धत गरी रातो मानिस पनि उदाहरणीय बन्यो।
(उमंग कार्की नेक्सस इन्टरनेशनल स्कुल, पेप्सीकोलामा कक्षा ४ मा अध्ययनरत छिन्।)
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०७८, १४:२७:१०